Eyona misebenzi iphambili yokuThengisa kwi-Intanethi yamashishini amaNcinci naPhakathi | Martech Zone
Imisebenzi ephezulu yokuThengisa kwi-Intanethi yamashishini amancinci naphakathi
NgoLwesibini, Juni 7, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Emarsys, umboneleli ophambili wesoftware yokuthengisa ilifu yeenkampani ze-B2C, ukhuphe iziphumo zomntu kunye novavanyo olwenziwa kwi-Intanethi lweengcali zentengiso ezingama-254 ezipapashwe ngentsebenziswano neWBR Digital. U-KIziphumo zamehlo zibandakanya Ii-SMBs (amashishini anengeniso eyi- $ 100 yezigidi okanye engaphantsi) kwintengiso ye-B2C iphuhlisa iindlela-qhinga ze-omnichannel ejikeleze impumelelo eqinisekisiweyo, bachitha ixesha elininzi belungiselela ixesha lokuthenga elixabisekileyo, kwaye bazama ukuzisa itekhnoloji ethe xhaxhe phambili, kwaye baqhubeke nesantya se-omnichannel innovations ngokudibanisa amava edijithali kunye namava ezitena nodaka, ngelixa utyala imali kurhwebo.
Ii-SMBs zanamhlanje zikwindawo enomdla- ngaphandle kobungakanani bazo, zisenokuxhamla kwizicwangciso zokuthengisa ezifanayo kunye neetekhnoloji ezisetyenziswayo kwaye zisetyenziswe yimibutho emikhulu. Ngokusebenzisa izicwangciso zedijithali ze-omnichannel, iinkampani ezinje ngeAmazon ziyaqhubeka nokuphakamisa ibha ngokulula, ukugcinwa kwabathengi kunye nokuzaliseka. Ii-SMBs azikubonanga oku kuphela, kodwa ngo-2016, zifuna ukuhlengahlengisa indlela ezisebenza ngayo ukuze zilungele iparadigm ye-omnichannel.
Ngokweziphumo zophando, abathengisi abavela kwii-SMB badwelise imisebenzi ephezulu kwi-Intanethi kunye nefuthe labo ekufumaneni nasekugcinweni. Ukuthengisa nge-imeyile kukhokelela ekufumaneni nasekugcinweni njengomqhubi ophambili. Uluhlu oludwelisiweyo lukhangelo lwezinto eziphilayo, ukukhangela okuhlawulelweyo, amajelo eendaba ezentlalo, ukuphinda ujonge ekujongeni, ukuthengisa ngokubambisana, ukuthengisa ngeselula, kunye nokuthelekisa iinjini zokuthenga.
Ngokusekwe kwiziphumo zeentengiso eziphezulu ze-SMB eziphandwe:
I-81% ye-SMBs ixhomekeke kwi-imeyile njengomqhubi ekufumaneni abathengi, kunye ne-80% yokugcina abathengi
Iipesenti ezingama-73 zabathengisi zibeka i-imeyile njengento ephezulu yohlahlo-lwabiwo mali, enye kwindawo ezintlanu ikubeka njengeyona nto iphambili kutyalo-mali
Ii-SMB zibone ukuzuza kwii-KPI ezinkulu: amaxabiso okuguqula anyuke nge-72%, ixabiso le-odolo eliphakathi lonyuswe nge-65%, kwaye ukuphinda ukuthengwa kwabathengi kunyuke nge-58%
I-70% yee-SMBs ziqala ukucwangcisela iholide kungadlulanga uJulayi
I-54% yee-SMB zichonge ii-imeyile zokulahla inqwelo moya njengeyona ndlela yokuthengisa ephumeleleyo kunye neengcebiso ezisekwe kwindawo eza kwindawo yesibini kwi-47%
Sifumanise ukuba ii-SMB zinobuchule kwaye ziyakhawuleza ukuphendula kwimeko yanamhlanje yokukhuphisana. Ii-SMB zifuna amaqonga agile akhawulezayo ukumiliselwa kwaye asebenziseka lula. Ii-SMB ezinje ngexabiso eliphantsi kunodaka, iRawlings, kunye neZikhuhli kunye nangaphaya ziye zajika zaya e-Emarsys ukubona i-ROI ekhawulezileyo, zihlala zikhuphisana kwaye zinxibelelana nabathengi bazo ngexesha elifanelekileyo kumajelo alungileyo. Ukongeza, ii-SMB zixhasa ukuqonda kokuziphatha kwabathengi ukwenza amava okuthenga ngaphandle komthungo kubathengi kwizixhobo nakwimijelo. Obu bubungqina bokuba ii-SMB zijolise kugcino lwabathengi-into edlalwa ngabadlali abakhulu ukuba bayithathele ingqalelo. USean Brady, uMongameli waseMelika, Emarsys
Kolu phando, u-Emarsys ubambisene ne-WBR Digital abavavanye iingcali zentengiso ezivela kumashishini ahlukeneyo e-B2C anoxanduva lokuthengisa, e-commerce, ukuthengisa kunye nokusebenza kwabo. Uphando lomntu kunye nodliwanondlebe lwenziwa kwindawo ka-2016 Inkomfa ye-eTail West.
tags: urhwebo umanyanisoukuthelekisa iinjini zokuthengaemail Marketingishishini eliphakathiukuthengisa okuphakathiurhwebo mobileuphando lwezinto eziphilayoukukhangela okuhlawulelweyoukubuyisela kwakhonaShishiniukuthengisa amashishini amancincismbUkuthengisa smbImidiya yokuncokola
Ii-ABC ezintsha zoThengiso: Soloko unxibelelana